Fikrado | Xasuuqii sababay dhamaadkii Boqortooyada Ingiriiska - New York Times - TELES RELAY
ACCUEIL » kale »Faallo | Xasuuqii sababay dhamaadkii Boqortooyada Ingiriiska - New York Times
Laakiin marka sharciga cusub ee Rowlatt lagu dhawaaqo, Gandhi ayaa markiiba sheega mucaaradkiisa waxana uu ku baaqayaa shaqo joojin guud ee 6 April 1919. Wuxuu ka codsanayaa dadweynaha inay ku biiraan dagaal aan toos ahayn ama satyagraha : Daawo soonka maalinta oo dhan kuna qabso shirarka si aad u dalbato ka noqoshada sharciga.
Cadaadiska gobalka Punjab ee waqooyiga Hindiya ayaa horeyba u kululaa ka hor Gandhi dalbaday satyagraha. Dhamaan dawladaha, hoggaamiyeyaasha Hindu, Muslimiinta, iyo Xisbiga Sikh ayaa ka xanaaqay Sharciga Rowlatt; Gandhi ayaa wacdey munaasabadda ka soo horjeeda sharciga.
Dhibaatooyinka waxaa ka mid ahaa welwel gaar ah oo ku wajahan Ingiriiska, iyada oo Punjab ay ahayd maaliyad dhaqaale iyo milatari. Waxay si xoog leh u maalgeliyeen waraabka waraabka si ay gobolka ugu soo celiyaan dambiil cunto oo loogu talagalay boqortooyadda. Ciidanka gumaysiga si ballaaran loo qoro gobolka, iyada oo tixgelineysa Sikhsiyada "tartanka isdaba jooga". Dagaalkii koowaad ee adduunka, ciidamada Punjab waxay ka sameeyeen saddex meelood hal meel oo ka mid ah Ciidamada Hindida India, kuwaas oo inta badan la geeyay intii lagu jiray dagaalka. . Joogitaanka la gubi karo ee askarta gardarada ah ee kulaylka ah ee carqaladaha anticolonial ayaa ka careysiisay Ingiriiska.
Xiisada ayaa kacday markii Gandhi uu ku dhawaaqay inuu go'aansaday inuu u safro Punjab. Bishii Abriil 10, xukuumadda gumeysiga ayaa joojisay tareenkii qabsaday Gandhi, isaga oo qabtay isaga oo u diray Bombay. Dibadbaxayaasha ku sugan Amritsar ayaa la dagaallamaya masuuliyiinta; ciidamada ayaa dilay ugu yaraan 10. Dad badan ayaa weeraray hantida dawladda waxayna gubeen laba bangi. Shan qof oo reer yurub ah ayaa la dilay, laakiin munaasabaddii ugu xumayd Ingiriiska ayaa ahaa weerar lagu qaaday Marcella Sherwood, oo ah adeeg yurubiyiin ah oo dhaawacmay una geeriyooday geerida waddada.
Markii loo diray Amritsar, General Dyer ayaa la wareegay maamulka dadweynaha rayidka ah. maamulka 11 April. Wuxuu soo saaray farriin uu ku mamnuucayo kulannada dadweynaha iyo digniinta ah in kulammadaasi ay ku kala firdhin doonaan xoog. Nabad ayaa dib loo soo celiyaa, laakiin dadku ma cabsi galin.
Bishii Abriil 13, dhowr kun oo qof ayaa ku soo biiray Jallianwala Bagh oo ka soo horjeeday amarradii General Dyer. Nasiib wanaag, ayuu goobta ku tagay isaga oo la socda laba askari oo gaashaan ah. Sidii ay u heli lahaayeen jardiinada daaqada ah ee cidhiidhi geliyey, waxay hoos ugu dhaadhaceen dhulka, iyagoo dhulka ku socday oo dab qabsaday.
Dulmadii waxay sameysay cinwaano caalami ah. Rabindranath Tagore, gabayada iyo abaal-marinta Nobel, ayaa dib u soo ceshaday jilbihiisii ​​isaga oo mudaaharaadaya. Winston Churchill ayaa ugu yeeray "toogashada". Xukuumadda ayaa lagu qasbay inay samayso guddi baadhitaan ah. Hogaamiyaha aan la socon ayaa qiray in ujeedadiisa ugu weyni aysan ahayn in ay dadka kala firdhiso, laakiin ay soo saaraan "saameyn anshaxeed". Xukuumadda gumeysiga Hindiya waxay leedahay tallaabooyinka loo yaqaan 'General Dyer' oo aan caddaalad ahayn oo laga eryey adeegga.
Xafiiska kombiyuutarka ee Senate-ka ee ku yaala aqalka qoysaska leh "reerka" ee fadeexadda Xasan Caydiid